Ngwaọrụ Na-eche Ihu Ahịa na Otu I Nwere Ike Isi Zụọ Ha | Martech Zone
Monday, May 4, 2015 Fraịdee, Nọvemba 17, 2017 Douglas Karr
N’ahịa nke oge a, ọrụ CMO na-enwewanye nsogbu. Teknụzụ na-agbanwe àgwà ndị ahịa. Maka ụlọ ọrụ, ọ na-esiri ike inye ahụmịhe ọhụụ na-agbanwe agbanwe gafee ebe ndị na-ere ahịa na njirimara dijitalụ ha. Ahụmịhe ndị ahịa dị n'etiti akara ntanetị na anụ ahụ dị iche iche dịgasị iche iche. Ọdịnihu ụlọ ahịa na-adabere na ịmekọrịta nkewa dijitalụ na nke anụ ahụ. Ndị na-ahụ maka ndị ahịa na-emepụta mmekọrịta mmekọrịta dị mkpa na gburugburu ya iji bulie ahụmịhe ndị ahịa na ọnọdụ anụ ahụ.
A Ndị Ahịa Na-eche Ngwaọrụ bụ ngwaọrụ nke onye ahịa ga-emekọrịta ma ọ bụ nwee ahụmịhe ozugbo. Ihe Nlereanya nke Ngwa Ahịa Na-echekwa gụnyere Digital Kiosks, Mobile Point of Sale (mPOS), Ngwaọrụ Ruggedized, Digital Signage ma ọ bụ Ngwaọrụ Headless. Ezubere ngwaọrụ ndị a niile iji gwa ndị ahịa n'ime ọnọdụ anụ ahụ.
Ngwa Ahịa Na-eche Ihu Ga-adaba Na Atọ Atọ
Ngwaọrụ Dijitalụ - Ngwaọrụ na-anapụta mmekọrịta mmekọrịta na ntanetị. Ihe atụ gụnyere Digital Signage, Mbadamba na Digital Kiosks.
Azụmaahịa - Ngwaọrụ ndị na-agbagha ahịa ndị ahịa. Ihe atụ gụnyere Mobile Point-of-Sale (mPOS) na Ngwa mmezu Iwu.
Ahụmahụ - Ngwaọrụ ndị na-ebuli ahụmịhe nke ndị ahịa. Ihe atụ gụnyere ofntanetị nke Ihe (IoT) Hubs Sensor, Ngwaọrụ Isi nke IoT).
Azụmahịa na-eji Ngwaọrụ Na-eche Ihu Ahịa dị ka kiosks ọrụ onwe ha maka ndị ahịa ha. Kiosks ndị a na-akwado ọtụtụ ọrụ ịzụ ahịa sitere na ahụmịhe wara wara na mmezi ngwaahịa na mkpọsa iji nweta nnabata onwe na ịtụ nri na ụlọ nri na ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ. Ndị ọchụnta ego na-eji akara ngosi dijitalụ pụrụ iche gafee ọtụtụ narị ebe iji mepụta ahụmịhe ọhụụ na-agbanwe agbanwe. A na-eji akara eji eji Digital eme ihe ngwa ahia maka ngwa ahịa na-ahụ maka dijitalụ, ụzọ-akara na ụlọ ahịa nri, ụzọ ịchọta akara ngosi, ihe omume na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Digital signage bụ a ọzọ na-eri na irè na siri ike ngwọta karịa biri ebi signage, nke na-enye ohere ulo oru iji video on ngwaahịa ngosipụta kama static oyiyi.
Ulo oru di iche iche na-etinye Ngwa ahia na ndi oru nke ndi oru iji meziwanye uzo iji zuta. Ngwa azụmahịa ndị a, dị ka mPOS ma nyefee ngwaọrụ mmezu na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, na-enye ndị ọrụ ohere ịkwalite ọrụ ndị ahịa site na usoro arụmọrụ na ọgụgụ isi karịa ngwaahịa na ọrụ ndị ahịa.
Dị amalitela iji Ngwaọrụ Na-ahụ Maka Ndị Ahịa iji chịkwaa ahụmịhe nke ndị ahịa ha. Sdị na-enwe ike ịgbaso usoro ndị ahịa na okporo ụzọ yana ụlọ ọrụ mmetụta. Site na iji ngwaọrụ na-enweghị isi, ụlọ ahịa nwere ike ịgbanwe ọkụ, nnukwu ụzọ ihu, yana egwu ike. Site na ihe ndị a na-achịkwa ha, ụdị nwere ike ịmepụta ahụmịhe ndị ahịa na-agbanwe agbanwe n'ọtụtụ ebe mgbere anụ ahụ. Ngwaọrụ ndị a anaghị achọ ihu igwe, mana dị ka Ngwaọrụ Na-echekwa Ndị Ahịa, enwere ike ijikwa ya.
Ndị na-ahụ maka ndị ahịa na-ewepụta mmekọrịta dị mkpa na nke mmekọrịta ya na ndị ahịa. Site na ịnyefe, ịtụ na ịchekwa mmekọrịta mmekọrịta, ị nwere ike ịkwalite mbọ gị na ahịa ịre ahịa maka ịbawanye ahịa na afọ ojuju ndị ahịa. Ọkọlọtọ, mbadamba-mbadamba mbadamba nwere ike ghọrọ n'ime Ahịa Ihu Ngwaọrụ na-enweghị isi ngwaọrụ nwere ike zụrụ n'okpuru $ 200. Ngwaọrụ na-eche ndị ahịa na-enye ngwọta siri ike ma na-efu oke ọnụ ahịa maka mkpa ahịa ahịa gị niile.
Iji nyere CMO aka ịghọta uru Ndị Ahịa Na-echekwa Ngwaọrụ yana otu esi ewebata ha n’ahịa ahịa ha, Moki mepụtara “CMO’s Guide To Customer Facing Devices.”
Tags: ahịa na-eche ngwaọrụkiosks dijitalụdigital signageiotiot headless ngwaọrụụlọ ọrụ sensọ iotkiosksmobile ebe nke ahịaekwentị mkpanaakamPOSiji mezuotebụl